Wararka Maanta: Isniin, Jan 11, 2019-Nigel Roberts oo lagu wado in loo magacaabo guddoomiyaha Bangiga Dhexe ee Soomaaliya
Jimco, Janaayo 11, 2019 (HOL) Warar xogagaal ah oo an naga soo gaarayo ilo ku dhaw-dhaw wasaaradda maaliyadda ayaa sheegaya in Nigel Roberts loo magacaabidoono guddoomiyaha Bangiga Dhexe ee Soomaaliya. Arrintaan ayaa soo shaac baxday ka dib markii bishan Jan. 4teedii golaha wasiirada ay meel-mariyeen sharciga ogolaanaya in qof ajinabi ah uu madax ka noqdo Bangiga Dhexe.
Niget Roberts waa aqoon yahaan u dhashay dalka Britain. Wuxuu ku soo biiray hay'adda Bangiga Adduunka ee World Bank sannadkii 1981 isaga oo ay shaqadiisu ahayd dhaqaalah Beeraha (agricultural Economist). Wuxuuna shahaada Masterka ku wataa cilmiga luqadda Ingriiska (English Literature). Wuxuu hay’adda Bangiga Adduunka la shaqeyneyey muddo 20 sanno ah. Wuxuuna ka soo shaqeeyey wadamada kala ah Nepal, Ethiopia, West Bank and Gaza, Sydney/Pacific